मत गन्ने सुस्त प्रक्रियालाई के भन्नुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः जेष्ठ ७, २०७४ - साप्ताहिक
मत गन्ने सुस्त प्रक्रियालाई के भन्नुहुन्छ ?
कुन कुराचाहिँ द्रुत गतिमा भएको छ नेपालमा ? मेलम्ची आउन २५ वर्ष लाग्ने देशमा यो के नै नौलो कुरा भयो र ?
मतगणना सकिउन्जेल सबैभन्दा कान्छी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले वृद्धभत्ताको दर्शन पाउने सम्भावना रहेको अवस्था ।
देशमा धेरै काम सुस्त गतिमा हुने गरेकोमा यो नौलो कुरा त होइन, तर जसरी निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी खटाइयो । त्यसरी नै म्यादी कर्मचारी खटाएर भए पनि द्रुत गतिमा मत गन्नुपर्ने हो ।
कृषा चौंलागाईं, निर्मात्री
कर्मचारीहरूमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म यस्तै हो ।
जया शर्मा, भिज्युअल आर्टिष्ट
प्रवृत्ति घुस्याहा छ, निर्वाचनको मत गणनामा घूस खान नपाइने भएर पो हो कि ?
आधुनिक सिस्टमप्रति गरिएको बेवास्ताको परिणाम हो यो । मतगणनाका क्रममा चुनाव चिन्ह धेरै भएर पनि मत गन्न बसेका कर्मचारीहरू कन्फ्युज भए ।
बनिष शाह, भिज्युअल एडिटर
प्रतीक्षा गरौं, प्रतीक्षाको फल मीठो हुन्छ ।
अरुणा कार्की, अभिनेत्री
राजनीतिक चलखेल हो यो । पुराना दलभन्दा नयाँले धेरै मत पाए भनेर ढिलाइ गरेका होलान् ।
मतगणनामा राजनीति हुँदैछ ।
अर्जुन अधिकारी, टेलिभिजनकर्मी
यस्तै हो भने अर्को चुनावमा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा २४ घण्टाभित्र मत परिणाम घोषणा गराउँछु भन्ने बुँदा थप्ने भए ।
प्रकाश बस्नेत, अभिनेता
म त यसलाई राम्रो भन्छु, किनभने परेको मत सबैलाई देखाएर त्यसमा सबैलाई सहमत गराई यसलाई परेकै हो है भन्ने कुरा निश्चित गर्न समय लागेको हो । समय लागोस्, तर गल्ती नहोस् ।
अभ्यासबिनाको तयारी ।
राजेश हमाल, गायक
मतगणनाका लागि निर्वाचन आयोग तथा सरकारले कुनै तयारी गरेनछन् । मतगणनाको वैज्ञानिक विधिबाट पनि उनीहरू बेखबर रहेछन् ।
ठाकुर बेल्बासे, सञ्चारकर्मी
धमाधम प्रतिपक्षको हकमा परिणाम आउन थालेपछि गठबन्धन सरकार तिलमिलाएको हुनुपर्छ, जसले गर्दा उ निर्वाचन आयोगलाई मतगणना छिटो र चुस्त बनाउने निर्देश दिन चुकिरहेको छ वा मतगणना सुस्त गराएर अरू नै चलखेल गर्ने योजनामा छ ।
अनुपम रोशी, साहित्यकार
यस्तो सुस्त गतिको मतगणनाबाट आएका मेयरले द्रुत गतिमा कुद्ने रेल ल्याउलान भनेर पत्याएँ मैले?
रविन सायमी, कार्टुनिष्ट
केही षड्यन्त्र पो हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ ।
यसले कौतूहलता बढाएको छ । नयाँ अनुहार पो आउँदैछन् कि ?
प्रनब जोशी, निर्देशक
यहाँ एउटा मत गन्न सात मिनेट लाग्दैछ, अनि उनीहरू नै स्मार्टसिटीको कुरा गर्दैछन् ।
देवेन लोहनी, इन्टरप्रेनर
निर्वाचन आयोगको मतपत्र छपाइसम्बन्धी अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो भएको हो, किनभने नोमिनेशन दर्ता गरेपछि मात्र मतपत्र छापिनुपथ्र्यो ।
श्रीधर पौडेल, फोटोपत्रकार
चलचित्रमा क्लाइमेक्स आउनुअघि पात्रको चरित्र विकास र कथाको गति सुस्त हुँदै जान्छ । त्यस्तै हो, प्रतीक्षाको फल पक्कै मीठो हुनेछ ।
यो त गति होइन, दुर्गति हो । तीन दिन गणना गरेर आधासम्म पनि पुग्न नसक्नु अदूरदर्शिता र कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरण हो ।
रवि श्रेष्ठ, विज्ञापन व्यवसायी
निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता ।
विवेक खतिवडा, आरजे
नौ महिने सरकार, मत गन्न पनि नौ महिना ।
रोशन मिश्र, भिज्युअल आर्टिष्ट
नेपाली चलचित्रको कथा किन मजबुत हुन नसकेको होला ? फाल्गुन ३०, २०७४
तपाईंभन्दा ठूलो कलाकार को हो ? फाल्गुन २२, २०७४
होली र चोलीबीच के सम्बन्ध छ? फाल्गुन १५, २०७४
हिजोआजको प्रेममा किन ब्रेकअप बढी हुन्छ ? फाल्गुन ९, २०७४
हिजोआजको प्रेममा किन बढी ब्रेकअप हुन्छ ? माघ २८, २०७४